We.com.mm - အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် အရသာရှိပြီး ချက်ရတာ လွယ်ကူတဲ့ ငါးသေတ္တာငါးပိချက်လေး လုပ်စားမယ်
အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် အရသာရှိပြီး ချက်ရတာ လွယ်ကူတဲ့ ငါးသေတ္တာငါးပိချက်လေး လုပ်စားမယ်
ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ အိမ်ရှင်မတွေ အတွက် လုပ်ရတာလွယ်ကူသလို အရသာရှိတဲ့ ငါးသေတ္တာငါးပိချက် လုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။ လုပ်ရတာလည်းလွယ်သလို ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကလည်း လွယ်လွယ်လေးဆိုတော့ အိမ်ရှင်တွေအနေနဲ့ လုပ်စားကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ လုပ်နည်းလေးကို ပြောပြပေးမယ်နော်။
၁. ငါးသေတ္တာ ( ၂ ဗူး )
၂. ကြက်သွန်ဖြူ ( ၁ လုံး )
၃. ငရုပ်သီးစိမ်း ( ၁၀ တောင့် )
၄. ကြက်သွန်နီ ( ၂ လုံး )
၅. ငါးပြုတ်ရည် ( အနည်းငယ် )
၇. အချိုမှုန့် ( အနည်းငယ် )
၁. အရင်ဦးဆုံး ခွက်ကြီးကြီးထဲသို့ ငါးသေတ္တာတွေကို ထည့်ပြီး ချေလိုက်ပါ။
၂. ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း တို့ကို လှော်ပြီး ထောင်းလိုက်ပါ။ ထောင်းလို့ရလာတာတွေကို ငါးသေတ္တာ ချေထားတဲ့ ခွက်ထဲသို့ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် အချိုမှုန့်၊ ငံပြာရည်နဲ့ သံပုရာရည်ညှစ်ပြီးမွှေလိုက်ပါ။
၃. မွှေလိုက်လို့ ပျစ်နေတယ်ထင်ရင် ငါးပြုတ်ရည်လေး ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် အရသာရှိတဲ့ ငါးသေတ္တာ ငါးပိချက်ကို ရရှိပါပြီနော်။ တို့စရာအစုံအလင်နဲ့ထမင်းစားလို့ကတော့ တကယ်ကို ထမင်းမြိန်မှာနော်။ ဒါကတော့ ထိုင်းစတိုင် ငါးပိချက် ချက်နည်းလေးပါ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့အစိမ်းရောင်ချောကလက် cupcake လေးတွေလုပ်စားကြည့်ရအောင်...
အိမ်မှာ ဝက်ခေါက်သန့်သန့်လေး ကြော်စားမယ်
ဝက်သားတုတ်ထိုးချစ်သူတွေ မဖြစ်မနေသွားသင့်တဲ့ ဆိုင်များ